Mambo nemachinda vachatonga kuti pave nekururama (1-8)
Vakadzi vasingatirimuki vanoyambirwa (9-14)
Makomborero panodururwa mweya (15-20)
32 Inzwai! Mambo+ achatonga kuti pave nekururama,+Uye machinda achatonga zvakarurama. 2 Mumwe nemumwe achaita senzvimbo yekuhwanda mhepo,Nzvimbo yekuhwanda mvura* ine dutu,Sehova dzemvura munyika isina mvura,+Semumvuri wedombo guru munyika yakaoma. 3 Ipapo maziso evaya vari kuona haazorambi akavharwa akanamana,Uye nzeve dzevaya vari kunzwa dzichateerera. 4 Vaya vane mwoyo inomhanyirira zvinhu vachadzamisa pfungwa kuti vave neruzivo,Uye rurimi runokakama ruchataura zvakajeka, ruchitsetsenura.+ 5 Benzi harichazonzi rine rupo,Uye munhu asina tsika haazoshevedzwi kuti mukuru mukuru; 6 Nekuti benzi richataura zveupenzi,Uye mwoyo waro ucharonga zvinhu zvakaipa,+Kuti ripandutse vanhu* uye kuti ritaure zvakatsauka pana Jehovha,Kuti rishayise munhu* ane nzara zvekudyaUye kuti rinyime munhu ane nyota chekunwa. 7 Mazano emunhu asina tsika akaipa;+Anofurira vanhu kuita zvinhu zvinonyadzisaKuti aparadze munhu anotambudzika nenhema,+Kunyange murombo paanotaura zvakarurama. 8 Asi munhu ane rupo anoda zvekupa,Uye anoramba achiratidza rupo. 9 “Simukai, imi vakadzi vasingatirimuki, muteerere inzwi rangu! Imi vanasikana vasingakendengi,+ inzwai zvandinotaura! 10 Imi vasingakendengi muchadedera pachapera nguva inongoti pfuurei gore,Nekuti pachange pasina muchero unenge waunganidzwa kana kukohwa mazambiringa kwapera.+ 11 Gwagwadzai, imi vakadzi vasingatirimuki! Dederai, imi vasingakendengi! Pfekenurai musare muri mushutu,Uye sungirai masaga muhudyu dzenyu.+ 12 Zvirovei zvipfuvaMuchichemera minda yakanaka nemuzambiringa unobereka. 13 Nekuti nyika yevanhu vangu ichazara neminzwa nemakwenzi ane minzwa;Zvichazara mudzimba dzese dzemufaro mukuru,Muguta rekupembera nemufaro.+ 14 Nekuti shongwe yakasimba yasiyiwa;Guta reruzha rasiyiwa.+ Oferi+ nenharire zvangova nyika isina chinhu inongogara yakadaro,Nyika inofarirwa nemadhongi emusango,Iwo mafuro ezvipfuwo,+ 15 Kusvikira mweya wadururirwa patiri uchibva kumusoro,+Uye renje rava munda wemichero,Uye munda wemichero wava kuonekwa sesango.+ 16 Kururama kuchabva kwagara murenje,Uye kururama kuchagara mumunda wemichero.+ 17 Kururama kwechokwadi kuchaita kuti pave nerugare,+Uye kururama kwechokwadi kuchabereka runyararo nekuchengeteka zvinoramba zviripo.+ 18 Vanhu vangu vachagara munzvimbo ine rugare,Munzvimbo dzekugara dzakachengeteka nemunzvimbo dzekuzororera dzine runyararo.+ 19 Asi chimvuramabwe chichaparadza sango,Uye guta richasara rangoti sandara. 20 Munofara imi munodyara mbeu pedyo nepese pane mvura,Imi munosairira mombe nedhongi.”+
^ Kana kuti “yekupotera pamvura.”
^ Kana kuti “riite zvisina rukudzo.”
^ Kana kuti “mweya wemunhu.”